Akwụkwọ Ahịa Akara Gị Maka Dnapụta Oge Ezumike 2020 | Martech Zone
Ọrịa na-efe efe nke COVID-19 enweela mmetụta dị egwu na ndụ ka anyị si mara ya. Kpụrụ nke ihe ndị anyị na-eme kwa ụbọchị na nhọrọ anyị, gụnyere ihe anyị na-azụ na otu anyị ga-esi mee nke a, agbanweela na-enweghị akara ọ bụla nke ịlaghachi n'ụzọ ochie n'oge ọ bụla. Mara ezumike dị n'akụkụ nkuku, inwe ike ịghọta na ịtụ anya omume ndị ahịa n'oge oge a na-enweghị atụ nke afọ ga-abụ isi ihe ga-eme ka ị nweta ihe ịga nke ọma, ahụmịhe ịzụ ahịa pụrụ iche na gburugburu ebe obibi.
Tupu ịmalite usoro zuru oke, ọ dị mkpa ka anyị buru ụzọ tụgharịa uche n'ụfọdụ ụzọ dị ịrịba ama na omume ndị ahịa site na ọkara mbụ nke 2020, yana ihe nsonaazụ a bụ maka ndị na-ere ahịa na ụdị. Dịka ọmụmaatụ, na okpomoku nke mgbasa ozi COVID-19, ndị na-ere ahịa na-ahụ ịrị elu na ịzụ ahịa n'ịntanetị na nke ọ bụla ebe ndị mmadụ na-ahọrọ usoro nchekwa nchekwa na nchekwa dị mfe karị. N'ezie, ma e jiri ya tụnyere ịzụ ezumike ezumike nke afọ gara aga, ndị ahịa kwuru na 49% nwere mmasị n'ịzụ ihe n'ịntanetị yana 31% nwere mmasị karịa ịzụ ihe na ngwa. N'ọnọdụ ụfọdụ ndị na-ere ahịa kwesịrị ịma na ikekwe oge a, karịa karịa ndị ọzọ ọ bụla tupu ya, ga-abụ ezumike mbụ nke dijitalụ.
Ọzọkwa, nnata InMarket na data kaadị akwụmụgwọ na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-atụgharị uche n'ihe bara uru jikọtara ọnụahịa ha kacha mara nke ọma n'oge a na-ejighị n'aka. N'ezie, egosiputara akara ngosi ndi mmadu na-eto eto na ndi mmadu nile na-enweta ego, tinyere ndi na eme ihe kariri 100K kwa afo, na itinye ego na otutu ndi mmadu na-abawanye dika ndi ahia na-alaghachi na aha ndi amara na onu ahia di ka ihe kacha ha nma.
Lelee InMarket InSights
Idebe mgbanwe ndị a n’uche na iji usoro mgbasa ozi dị irè ga-abụ isi ihe dị mkpa iji gbochie ahụmịhe ịzụ ahịa ndị ọzọ nwere mmetụta dị egwu nke na-eweta mkpọtụ nke oge ezumike, yana nke ọgba aghara COVID-19. Dị ka ndị dị otú a, ụdị ndị mmeri ga-ejide n'aka na ha ga-eburu n'uche isi ihe ndị a na atụmatụ ha:
Ghọta Ndị Na-ege Gị Ntị
Dị ka mkpọsa ọ bụla, ịghọta ndị na-ege ntị lekwasịrị anya na omume ha tupu ịga eleta ga-abụ ụzọ mbụ dị mkpa iji ruo ndị ahịa aka n'oge ahụ. Nke a ga - adịkarị mkpa n'oge a, ebe omume ịzụ ahịa na mkpa na - aga n'ihu na - agbanwe. Ileba anya na nleta nleta site na data ọnọdụ akụkọ ihe mere eme abụrụla isi ihe gbasara usoro nchịkọta ozi, mana ọ ga-egosi na oge ezumike a dị oke mkpa iji tụlee mgbanwe ndị a na-enweghị atụ na usoro ịzụ ahịa. Akụkụ ndị dị mkpa iji chọpụta oge a nwere ike ịbụ ndị na-azụ ahịa nwere mmasị na nnara nnuku, ndị nwere ike ịgbanwe omume ịzụta ọwa na-echebara ọrịa ahụ na-efe efe, yana ndị na-emegharị maka mpụga gburugburu site na ịnabata ihe omume ntụrụndụ na ọdịmma ha.
N'ịghọta ihe gbara ya gburugburu, na inwe ike ịkọwapụta mkpa na omume ndị na-ege ntị bụcha ihe ụdị niile na-agba mbọ iji nweta, nyocha data ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ dị mkpa na usoro a. Yabụ, n'oge a na-achikọta ozi a, a na-atụle echiche 360 ​​nke ndị na-azụ ahịa mgbe ị na-enyocha omume ịzụ ahịa tupu ị gaa. Naanị mgbe ahụ ka ndị ahịa ga-enwe ike iji nghọta mee ihe nke ọma iji kọwaa usoro nkwupụta mgbasa ozi ha.
Leverage Ọtụtụ ọwa na Real-Time
Site na ịrị elu nke mmasị maka ịzụ ahịa n'ịntanetị na nke ọ bụla, ịgbanye ọtụtụ ọwa na mgbasa ozi ahịa gị ga-abụ isi ihe ga-eme ka ndị ahịa dịgasị iche iche nwee ọtụtụ ntụpọ aka n'oge.
Ma na ntanetị, site na mkpanaka / na ngwa, ma ọ bụ site na TV ejikọtara, iji usoro ntinye oge gafee nyiwe ndị a ga-adị mkpa iji zipu ma nyochaa ahụmịhe ndị ahịa 360 n'oge mkpebi ha na ịzụta njem. Dika ohere itinye aka na dijitalụ na-etolite karịa oge, ụdị mmeri ga-abụ ndị na-amụta otu esi eme ka ọtụtụ nyiwe ndị a ruo ndị ahịa n'ụlọ, na ịga na ụlọ ahịa n'oge mkpa ha.
Ọdịnaya Curate mgbe ị na-enye Mfe, Ọsọ, Conzụ Ihe Na-adaba
Na ihu igwe nke oge a, imebi mkpọtụ site na iji anya, nke dị mkpa ma na-adọrọ adọrọ bụzi okpokoro okpokoro. Ebe ndị ahịa na-arịwanye elu ma na-ala azụ itinye ego na ịzụrụ ihe na-enweghị isi, ọ bụ ugbu a ọ dịkarịrị mkpa na ụdị ndị a na-ebufe ozi ezubere iche iji wulite ntụkwasị obi, mmata, na echiche nke enyemaka site na ụdị ndị na-enyere ndị ahịa aka na njem ha zụrụ. . N'ime nke a, ịzụta mgbanwe ga-adị mfe karị, yana nke ka mkpa, a ga-atọ ntọala maka mmekọrịta ndị ahịa ogologo oge.
Ọzọkwa, ụdị ga-adị mkpa ịgbakwunye ozi ha site na ịnabata teknụzụ na ịkwalite ọrụ ịzụrụ ngwa ngwa, dị mfe ma dịkwa mfe dị ka ịtụ otu ịpị ịpị, pịa ọrụ ụgbọ ibu, n'ịntanetị iji gbochie nhọrọ nnara na ngwa ahịa / ngwa ahịa. Site na ịlele mmetụta nke mbọ mgbasa ozi mere n'oge gara aga yana omume ha na-anọghị n'ịntanetị na omume ịzụrụ, ụdị ga-enwe ike ịghọta nke ọma ndị ndị na-azụ ha bụ na ụdị ọdịnaya, izi ozi na ọrụ na-akwalite akparamagwa ịzụ ahịa na ịzụrụ ihe. Me nyocha a na-aga n'ihu ga-enye ohere ọ bụghị naanị mkpọsa ezumike na-aga nke ọma, mana mkpọsa n'ọdịnihu na-abịa.
Iburu isi ihe ndị a n'uche, mgbe ị na-aghọta mgbanwe ndị na-adịbeghị anya n'àgwà ịzụ ahịa n'ihi COVID-19, ha abụọ ga-adị mkpa maka ụdị ndị ga-eme nke ọma n'oge ezumike a n'okpuru ọnọdụ ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya. Ma imebi site na mkpọtụ mkpọsa nke mgbasa ozi na-akwọ ụgbọala na uru ịkwọ ụgbọala ga-abụ ihe ịma aka ga-adịte aka karịa ezumike ahụ ka ahịa na-ahụ njem ahụ gaa n'ọtụtụ ọwa na ụkpụrụ nke mgbanwe azụmahịa na-agbanwe na ntanetị. Agbanyeghị na ọnwa ole na ole sochirinụ ga-anọgide na-abụ oge enweghị amụma maka azụmaahịa, nnabata ụzọ dị mkpa bụ ntụkwasị obi anyị na-arịwanye elu na nghọta data na ojiji nke steeti adtech solutions iji ghọtakwuo omume ndị ahịa ma jikọọ na ọkwa dị omimi , na-ewulite ahụmịhe ka mma maka ụdị na ndị ahịa.
Budata akwụkwọ ezumike ezumike 2020 nke InMarket
Anyị na-achọ ka ị kachasị mma n'oge ezumike a, yana ịzụ ahịa obi ụtọ!
Tags: 2020360 ogoteknụzụ mgbasa ozimgbasa oziahụmịhe nke ndị ahịaCOVID-19ịzụ ahịa ezumikeinmarketotutu ọwaọrịaozugboretailndị na-ege ntị